Beauty Angel Beauty Spa | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Beauty Angel Beauty Spa | Tamwe
Beauty Angel Beauty Spa
Beauty Angel Beauty Spa ကို အမှတ် ၁၆ ဘီ ၊ ၁၆၆ လမ်း ၊ တာမွေမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်တွင် ခေါင်းလျှော် ၊ဆံပင်ညှပ်၊ ကောက်၊ ဖြောင့် ဆေးအမျိုးမျိုး ဆိုးပေးခြင်း၊ ခြေသည်း လက်သည်း ပန်းအလှပုံဖေါ်ပေးခြင်း ၊မျက်နှာချေးချွတ်ပေါင်းတင်ခြင်း ၊ဆံပင်ပေါင်းတင် ၊ဖယောင်းသွင်းခြင်း ၊တစ်ကိုယ်လုံးပေါင်းတင် Body Massage & Spa ၊ Foot Massage ၊ မျက်တောင်ဆက် စသည်တို့ကို ကိုးရီးယားနည်းပညာအသုံးပြု ပြီးတစ်နေရာထဲမှာ အားလုံးပြည့်စုံစွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။ အီတလီ ၊ ဂျပန် ၊ ကိုးရီးယား skin and hair products များကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ Promotion အစီအစဉ်ထားရှိပြီး 10% - 20% discount ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာ မနက် ကိုးနာရီ မှ ည ကိုးနာရီအထိ ဖြစ်ပြီး ပိတ်ရက်မရှိပါ။ ဆိုင်၏ အပြင်အဆင်မှာလည်း သပ်ရပ်ပြီး ကျွမ်းကျင် ၀န်ထမ်းများမှလည်း လူကြီးမင်းများ စိတ်တိုင်းကျ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ပြည်တွင်း Hair Stylist များမှ အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးသောဆိုင်လေးဖြစ်ပါသည်။
No 16B, 166 Street, Tarmwe Township, Yangon.
အနီးအနား တာမွေပလာဇာ မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Beauty Angel Beauty Spa Beauty Angel Beauty Spa is located at No 16B, 166 Street, Tarmwe Township, Yangon, and is opened since 2015. There are numerous kinds of beauty services available for all ladies and gents such as Hair Cuts, perm, straight, color, shampoo and other hair related services, nail arts, body spa, body massage, facial, foot massage by using Korean technique. They use high quality products of Italy, Japan, Korea and more to give the best quality for customers. Promotion programs are often available as of 10% to 15% discounts for all services. Interior decorations of this spa are fully functioning and their staffs are also well trained to treat and serve to customers with the best. Hair stylists are local professional stylists and services are good enough to professionalism. Opening Hours is 9:00 AM to 9:00 PM for all days and you are warmly welcome to visit and enjoy to this spa.
Salon 166 Lady Only
Unique Gym & Health Club (2)
Chan Myae Phyu Sin Dental Clinic